Ukuthengisa izindlu nomhlaba Kwintengiso ngaphakathi Quezon, Metro Manila
Ukuthengisa izindlu nomhlaba ngaphakathi Quezon
1 - 10 ka 168 Uluhlu
Ipapashwe ngu Seth Agbulos
Ipapashwe ngu Ryan Cabalde
umbono Ukuthengisa izindlu nomhlaba ipapashiwe 2 days ago
Ipapashwe ngu Jessica De Leon
Ipapashwe ngu Erwin Madlangbayan
Ipapashwe ngu Francis Reinares
Ipapashwe ngu Grace Luciano
umbono Ukuthengisa izindlu nomhlaba ipapashiwe 4 days ago
Ipapashwe ngu Joseph Jordan M. Ongtangco
Ipapashwe ngu Bartolome Edgar
Ipapashwe ngu Benjie Polido Jr.
Ipapashwe ngu Virginia De Ramos
umbono Ukuthengisa izindlu nomhlaba ipapashiwe 6 days ago
IMetropolitan Manila (ihlala icuthulwe njengeMetro Manila; isiTagalog: uKalakhang Maynila), ngokusemthethweni weNational Capital Region (NCR), sisihlalo sikarhulumente kwaye yenye yeendawo ezintathu ezichaziweyo kwisixeko esikhulu kwiiPhilippines. Iqulathe izixeko ezili-16: isixeko saseManila, isiXeko saseQuezon, iCaloocan, iLas Piñas, iMakati, iMaloni, iMandaluyong, iMarikina, iMuntinlupa, iNavotas, iParañaque, iPassay, iPasig, iSan Juan, iTagigig, neValenzuela, kunye nesixeko umasipala wePateros. Lo mmandla ujikeleze umgama oziikhilomitha ezili-619,57 zeekhilomitha (239.22 sq mi) kunye nabemi be-12,877,253 ukusukela ngonyaka ka-2015. Ngowesibini kwezona ndawo zinabemi kwaye uninzi lweyona ndawo inabemi basePhilippines. Ikwayindawo ye-9 yeyona ndawo inabemi abaninzi e-Asiya kunye neyona 5 yeyona ndawo inabantu abaninzi ezidolophini. Lo mmandla liziko lenkcubeko, uqoqosho, ezemfundo kunye norhulumente wakwiiPhilippines. Yenziwe njengesixeko samandla ehlabathi, lo mmandla unempembelelo ebalulekileyo kwezorhwebo, ezemali, imithombo yeendaba, ubugcisa, ifashoni, uphando, itekhnoloji, imfundo, kunye nolonwabo, ekuhlaleni nakwamanye amazwe. Likhaya kubo bonke abathuthuzeliyo kunye nozakuzaku bakwiiPhilippines, ngaloo ndlela isenza iziko elibalulekileyo lokuzimela kwilizwe jikelele. Amandla ayo ezoqoqosho enza le ngingqi ibe lilizwe eliphambili kwizwe ngezemali nakwezorhwebo. Ummandla ubiza i-37,2% yemveliso yasekhaya ePhilippines. Lo mmandla wasungulwa ngo-1975 ngeSigqibo sika-Mongameli Nombolo 824 ukuphendula kwiimfuno zokuxhasa ukwanda kwabantu kunye nokudala iziko lamandla ezopolitiko kunye nesihlalo. yoRhulumente bakwiiPhilippines. Iphondo laseManila, iqabane elabelwe lo mmandla, lelinye lamaphondo asibhozo okuqala awavukela urhulumente waseSpain wakoloni ePhilippines ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19. Indima kaManila kuHlaziyo ihlonitshwe kwiFlegi yePhilippines, apho imitha yelanga ezisibhozo zifanekisela amaphondo e-Revolution.